Mmadụ Bịa Iji Simatech
Simatech Inc. bụ a biotech ụlọ ọrụ na-elekwasị anya n'ichepụta nke ndammana ewepụtara, ere ure silk fibroin biomaterials na mmepe nke ala-nke-na-art usoro maka a dịgasị iche iche nke Biomedical ngwa. Anyị na-e-emegbu na ubi ngwaọrụ ahụike na-achịkwa ọgwụ nnyefe iji silk fibroin dị ka a isi na-echepụta ihe. Na isi teknụzụ na usoro nke proprietary ngwaahịa a na-mepụtara, Simatech ga-eme ka onyinye iji merie ọrịa ma melite ogo nke ndụ. Na Simatech, anyị na-eme ihe kasị mma anyị na-akwado gị nnyocha na mmepe na-eme site n'inye ọkọlọtọ na ahaziri silk fibroin ngwaahịa. Anyị na-na-anabata nwere mmekọ n'ụwa nile inyocha ọhụrụ ubi nke na ngwa ma ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa na anyị.
Gịnị Ka I Kwesịrị Tụlee Anyị Products?
B asic ihe
The silk fibroin ngwaahịa nyere pụrụ ozugbo-eji ahịa dị ka isi ngwaọrụ n'ihu echepụta dị iche iche silk fibroin ihe.
E ssential ibiere
Nnukwu-ọnụ ọgụgụ n'ichepụta na elu ụlọ ọrụ na etozu usoro; Mma-guzobere àgwà akara usoro.
S ilk iyi
Silk, a ma ama na akwa ihe nke China, nwere ike mfe na ọma nwetara dị ka ma raw cocoons ma ọ bụ esichara emep uta eri site n'ógbè ndịda nke Yangtze River, maara dị ka "nna nke silk" n'ihi na ihe karịrị afọ 3,000.
Na ngwaahịa ndị edepụtara na-dabere na isi teknụzụ na ọbụ ikike arịa amamihe nke Simatech Inc.